सुनको मूल्यमा एक हजार रुपैयाँले ह्रास - लोकसंवाद
माघ १५, २०७७, बिहिबार
सुनको मूल्यमा एक हजार रुपैयाँले ह्रास
काठमाडाैं । स्थानीय बजारमा आज पनि सुनको भाउ ओरालो लागेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपले क्रमशः सफलता हासिल गरेको समाचार अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नै सार्वजनिक भएपछि विश्वव्यापी रुपमा नै सुनको भाउ क्रमशः ओरालो लागेको छ ।
प्रभावस्वरुप नेपाली बजारमा समेत पहेंलो धातुको भाउमा ह्रास आएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोला एक हजार रुपैयाँले घटेको छ । महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । मङ्गलबार प्रतितोला ९२ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोवार भएको छापावाला सुन आज एक हजार रुपैयाँले घटेको हो ।
यस्तै मङ्गलबार प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन पनि आज प्रतितोला एक हजार रुपैयाँले ओरालो लागेर ९१ हजार रुपैयाँमा कारोवार भएको छ ।
यस्तै चाँदीको मूल्य प्रतितोला २५ रुपैयाँ ले घटेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला एक हजार १८० रुपैयाँमा कारोवार भएको चाँदी आज भने प्रतितोला एक हजार १७५ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । केही समय पहिले सुुनको भाउ प्रतितोला एक लाख दुई हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
सुन तोलामा ४०० ले बढ्यो
करीब २५ लाख लगानीमा अम्बा र ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती
बुद्धिजीवी कि परजीवी ? विवेक बन्धक राखी पद र पैसाको पछि लाग्नेसँग 'समाजको रत्न'को अपेक्षा !?
पहुँचवालाको लुछाचुँडी : सङ्घीय तह तथा निकायमा हुने भागबन्डा र दलालतन्त्रले निम्त्याएको सङ्कट !
नेपालमा बहुमत पुनः एक पटक अफाबसिद्ध : दुई तिहाइ मत दिनेलाई नै प्रायोजित 'शक्ति प्रदर्शन' !
नेकपा विभाजनको वैधता: ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 'पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत' बाट !?